'Tsy hanao firaisana intsony izahay' - Antony 10 Maninona ary torohevitra ho an'ny tsirairay - Fifandraisana
'Tsy hanao firaisana intsony izahay' - Antony 10 Maninona ary torohevitra ho an'ny tsirairay
Noho izany, ny fiainam-pirazanao dia toa nidina ambany vao haingana, ary tsy azonao antoka ny antony.
Tsy fahita matetika ny mpivady mandalo ody maina na tsy manao firaisana firy rehefa mandeha ny fotoana, fa inona no ataonao momba izany?
Midika ve izany fa tsy mifankatia intsony? Tokony hisaraka ve ianao?
Ny valin'ireo fanontaniana ireo dia miankina amin'ny hoe mbola tianao ve ny vadinao amin'ny fahatsapana ara-batana sy ara-pihetseham-po - valiny ihany no fantatrao.
Raha te hampandeha tsara ny zavatra ianao nefa tsy misy ny fiainanao manao firaisana, dia vakio mba hahalalana raha misy mahazatra ireto feo ireto.
Manome tsipiriany izahay momba ny antony 10 mahatonga anao tsy hanao firaisana intsony, ary manome torohevitra hamahana ny antony tsirairay.
1. Miady saina ianao.
Sahiran-tsaina daholo isika, sa tsy izany? Saingy ireo soritr'aretina mety hateraky ny fihenjanana, na ara-tsaina na ara-batana, dia tsy dia voadinika loatra.
Betsaka amintsika no manana fahazarana manoratra zavatra amin'ny adin-tsaina sy milalao ny voka-dratsy aterak'izany eo amintsika, indraindray mitafy fihenjanana ho toy ny mari-boninahitra hanehoana ny zavatra ataontsika.
inona no zavatra mahaliana anao indrindra
Fa ny fanerena mandrakizay dia tsy zavatra tsara. Anisan'ireo tolotra takiana aminay, iray amin'ireo maty dia mety ho ny fiainanao amin'ny firaisana.
Ny fahatsapana ho variana satria miady saina ianao dia hisakana anao tsy hiditra amin'ny loha loha loha mba hifandray akaiky amin'ny vadinao. Raha tsy eo amin'ny lalao ny lohanao dia mety hanakana anao tsy hihodina ara-batana izany ary hanao sarotra sy tsy hahazo aina ny firaisana.
Mifampidinika mba hahitana ny fahasalamanao ary raha misy ny fanerena mahatonga anao na ny vadinao hiady saina bebe kokoa noho ny mahazatra.
Ianaro ny fomba fanaovana compartalize. Izany hoe mamorona fetra ara-tsaina eo anelanelan'ny zavatra mampiady saina anao sy ny fifandraisanao. Ireo fetra ireo dia tsy hanampy anao hifehezana ny haavon'ny adin-tsainao, fa hanampy anao hanalavitra ny tabataba ivelan'ny fifandraisanao ary hampijanona azy io amin'ny fotoana misy kalitao miaraka amin'ny vadinao.
2. fanabeazana aizana.
Ho an'ny vehivavy, afaka mahatsapa ho toy ny toeram-pitrandrahana any ivelany izy io mitady ny safidy tsara indrindra amin'ny fanabeazana aizana. Tsy misy 'iray habe mifanaraka amin'ny rehetra' ary maro no tonga miaraka amin'ny vokatra hafa izay mampiseho ny tenany samy hafa ho antsika tsirairay avy.
Mampalahelo fa ny voka-dratsy iray ateraky ny fanabeazana aizana hormonina dia mety ho fanelingelenana amin'ny filana ara-nofo voajanahary, na mampitombo azy na manakana azy io.
Ny olana amin'ny fanabeazana aizana hormonina dia ny tena toetrany. Natao izy ireo hanovana ny fandanjalanjan'ny hormonina miteraka ao amin'ny vatantsika mba hisorohana antsika amin'ny fizotran'ny fadimbolana voajanahary.
Ny fanafody fanabeazana aizana samihafa dia mampiasa ambaratonga estrogen sy progesterone ary karazana kinova simika namboarin'olombelona amin'ireo hormonina ireo. Tsy misy olona afaka milaza marina ny hataonao alohan'ny hanandramanao azy ireo, noho izany ny fitadiavana izay mety aminao.
Tsy fanovana fotsiny ny fitadiavanao firaisana ara-nofo. Ny fanabeazana aizana sasany dia mety hiteraka lanja sy hampihena ny fahatokisanao tena, raha ny hafa kosa mety hahatonga anao ho be fihetseham-po - tsy misy na iray aza manampy anao hanana toe-tsaina miaraka amin'ny vadinao.
Raha nahatsikaritra fiovana lehibe teo amin'ny fitondran-tenanao ianao tato ho ato, dia miresaha amin'ny mpiara-miasa aminao raha toa ka nahatsikaritra izy ireo koa, ary mieritrereta raha mifanaraka amin'ny fiovan'ny fanabeazana aizana anao.
Raha miahiahy ianao fa mety misy vokany ratsy eo aminao ny fanabeazana aizana, mangataha torohevitra ara-pitsaboana raha toa ka misy mety kokoa amin'ny vatanao.
Mety ho olana amin'ny lehilahy sasany koa ny fanabeazana aizana. Vitsy dia vitsy ny lehilahy maniry ny fahatsapana fimailo, saingy mety ho zavatra ilaina izany. Ary na izany aza, ny fampiasana ny iray dia mety ho nofy ratsy ho an'ny sasany.
Ny fiatoana tsy azo ihodivirana amin'ny fizotran-javatra, ny fikororohana mitady ny hanokatra ilay fonosana ary hametraka azy io - ireo rehetra ireo dia afaka mandray anjara amin'ny fitaintainanana izay mitarika fahaverezan'ny fitaintainana.
Ary raha misy ny tebiteby manodidina ny tsy fanatanterahana azy dia mety hidika izany fa tsy manomboka manao firaisana fotsiny ianao satria manahy mafy momba izany fotoana izany.
Ity olana ity dia zavatra azonao andramana atao amin'ny fomba vitsivitsy.
Voalohany, andramo ireo marika sy karazana fimailo isan-karazany satria mety ho hitanao fa mora apetraka kokoa noho ny hafa.
Faharoa, diniho ny fanontanian'ny namanao raha toa ka hapetrak'izy ireo izany - ity dia mety ho ampahany amin'ny foreplay ary hitazomana ny firaisana ara-nofo.
Farany, manazàra mitafy ny tenanao irery. Tsy misy mahamenatra ny fampiasana izay fomba ilaina rehetra hampazoto anao ary avy eo vao tonga amin'ny fihazakazahana - ara-bakiteny - amin'ny dingan'ny fametrahana azy. Tsy dia misy fanerena anao hanao, noho izany dia tokony hihena ny fanahiana. Ary, toy ny amin'ny zavatra rehetra, ny fanazaran-tena dia tonga lafatra.
ohatrinona ny vola azon'ny superstar mahery
3. Very ny bara.
Rehefa niaraka kelikely ianao ary lany ny vanim-potoanan'ny tantely dia mety ho hitanao fa tsy laharam-pahamehana intsony amin'ny firaisana ny firaisana.
Tonga dia mahazo aina miaraka ianareo ka tsy afaka manao ezaka ary tafiditra amin'ny fahazaran-dratsy tsy te hanandrana intsony.
Raha tsy manao firaisana dia mety ho mpiray trano fotsiny ianao. Ny fahasamihafana manamarika anao ho mpivady ary manamafy ny simia misy eo aminao.
Manomboha manao ny datin'ny daty ho fahazarana indray. Atsipazo ireo PJ mahasalama ary mijoroa amin'ny zavatra manahirana kokoa. Gaga ny sakaizanao amin'ny sakafo ara-pitiavana ary mandrara ny firesahana momba ny raharaha madinidinika anananao tamin'io herinandro io.
Ny fandaniana fotoana miaraka dia mety ho toa rendrarendrika, saingy ilaina izany raha tianao hiroborobo ny fifandraisanareo mandritra ny fotoana maharitra ary ho salama hatrany ny fiainanao amin'ny lahy sy ny vavy.
4. Very ny fatokisan'ny vatanao.
Ny tsy fitiavana ny tenanao dia hanakana ny famelana olon-kafa ho tia anao koa.
Raha sahirana ianao amin'ny fahatsapana ho mahazo aina amin'ny hoditrao manokana, dia hihena ianao ary tsy ho te-hiala amin'ny vadinao intsony.
Ny fahitana ny foton'ny tsy fahatokisanao tena amin'ny vatana no dingana voalohany handingana azy io.
Ny fiovan'ny lanja dia mety hampifandraisina amin'ny olana ara-pihetseham-po izay mety hiresaka tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fanampian'ny matihanina ara-tsaina, ohatra.
Raha niova ny vatanao hatramin'ny fanananao zanaka na hatramin'ny taonany, mifantoha amin'ny zava-bitan'ny vatanao fa tsy manahy momba ny taonany na ny volony.
Voahodidin'ny sarin'ny vatana ‘tonga lafatra’ isika, miaraka amin'ny seliby mirehitra abs misy tonony ary feny mahia tsy azo atao. Tsy tokony hotadidinao ihany fa ny ankamaroan'ireto sary ireto dia natao an-tsehatra, fa ny olona dia tonga amin'ny endrika sy habe samihafa ary tsy azo atao ny mampitaha ny tenantsika amin'ny olon-kafa.
Mandehana mora amin'ny tenanao ary mankasitraka ny vatanao amin'ny fahagagana. Ny fitiavanao tena no vavahady hamelana ny olon-tianao ho tia anao ara-batana indray.
5. Tsy manam-potoana ianao.
Miaraka amin'ny lisitry ny raha-hatao izay mipaka amin'ny mandrakizay, ny firaisana dia mety hianjera hatramin'ny farany ambanin'izany rehetra izany.
Hisy foana ny zavatra hafa mila atao izay toa manan-danja kokoa, fa raha tsy manokana fotoana hanaovana izany ianao dia hijanona tsy hanao firaisana ara-nofo mihitsy.
Ny firaisana ara-nofo dia ampahany manandanja amin'ny fifandraisanao ary mendrika ny fijerinao. Raha tsy ataonao loha laharana ny fanaovana firaisana dia ajanonao ny laharam-pahamehana amin'ny fifandraisanao, ary tokony ho eo an-tampon'ny lisitrao hatrany izany.
Raha tsy maintsy atao dia manorata fotoana ara-potoana hiarahana amin'ny vadinao. Amin'ny fiainana be atao, mety tsy ho anao ny tsy fahaleovan-tena, fa amin'ny minia mamolavola fotoana hiarahana, dia azonao atao ny mamorona fifandraisana akaiky eo amin'ny fiainanao indray mandeha.
Ary ny firaisana voalahatra dia tsy tokony ho fanaovana firaisana mankaleo. Mbola afaka manao firaisana ianao, ary mifanamboatra hahatsapa mahafatifaty, na dia ao anaty diary indray mandeha isan-kerinandro isaky ny alahady hariva!
6. Mitebiteby ianao.
Ny fanahiana dia mety hampihena ny vatana sy ny saina. Mety tsy ho tsapanao fa manahy ianao mandra-panombohanao mahita izany misy fiatraikany amin'ny faritra amin'ny fiainanao, ao anatin'izany ny fiainanao firaisana.
Ny fanahiana dia mety hisy fiantraikany amin'ny toe-tsainao, fatokisanao na haavon'ny adin-tsainao. Ny eritreritra ratsy dia mety hanakana anao tsy hanana toe-tsaina tanteraka na hanelingelina anao rehefa mitady ho akaiky ianao.
Arakaraky ny manomboka miantraika amin'ny fiainanao ara-nofo no mampatahotra anao dia vao manomboka mahatsapa ianao rehefa tonga hanao firaisana, mamandrika anao amin'ny tsingerina mila tapahina.
Amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo olon-tianao na mpitsabo iray momba ny antony mahatonga ny fanahianao dia afaka manampy anao izy ireo hiatrika fomba fiasa sasany hitazomana ireo fahatsapana ireo tsy ho lasa goavambe.
Ny fanananao tambajotra mpanohana hitodihana any amin'ny fotoan-tsarotra dia hanampy anao hamerina ny fitaintainanao, ary hanomboka hahita faritra hafa amin'ny fiainanao manomboka miverina amin'ny ara-dalàna ianao.
7. Be loatra ianao.
Rehefa reraka ianao ary te hatory, ny zavatra farany tsapanao fa manao firaisana.
Na ny asa na ny fiainam-pianakaviana no mampazoto anao, ny fanomezana anao firaisana ara-nofo noho ny fanakatonana fanampiny dia mety ho sarobidy amin'izao fotoana izao.
Indraindray, mety ho marina ianao raha te hiverina amin'ny fahazarana tsara. Fa rehefa tranga tsy tapaka io dia manomboka very ny fahafahanao mifandray indray amin'ny vadinao ary manamafy ny fifandraisanao.
Raha voaforona araka ny feony, ny fanaovana azy ho anisan'ny fanaonao amin'ny alina dia mety ho valiny. Manaova drafitra hiomanana hatory aloha kokoa noho ny mahazatra mba hankafizana ny fotoana fanampiny hiarahana. Fa maninona no mifidy ny firaisana ara-nofo tsara sy ny torimaso tsara rehefa afaka manana roa ianao?
8. Mila manova ny toe-tsainao ianao.
Ny firaisana ara-nofo, indrindra ho an'ny vehivavy, dia mety ho foto-kevitra sarotra.
ahoana no ahazoana bandy manaja anao
Betsaka ny hafatra mifangaro nalefa taminay. Mahita vehivavy manao firaisana ara-nofo amin'ny sarimihetsika, media izahay, na dia amin'ny catwalks aza. Ary asaina mamihina ny vatantsika sy ny fahalianana amin'ny firaisana isika.
Na izany aza, ny teny toy ny vehivavy mahamenatra sy mpivaro-tena dia atsipy tsimoramora amintsika ary azo tsaraina isika amin'ny famotopotorana ny fahalalahana ara-nofo indrindra raha ampitahaina amin'ny lehilahy.
Ireny hafatra mifanipaka ireny dia mety hanasarotra ny famihina tanteraka ny firaisana ara-nofo nefa tsy hahatsapa ho mahamenatra amin'ny lafiny sasany.
Ary ho an'ny lahy sy ny vavy rehetra, vao mainka sarotra ny raharaha raha nihalehibe tao amin'ny tokantrano ara-pinoana na hentitra, nentim-paharazana ianao, angamba nolazaina taminao fa tsy mety ny fanaovana firaisana alohan'ny fanambadiana, fa ny fikatsahana ny safidinao rehefa olon-dehibe.
Ny fahatsapana henatra sy fitsarana izay mihantona amin'ny fiainam-pananahana ataon'ny olona iray dia mety ho sarotra ny tsy raharahina ary manakana anao tsy hankafy tanteraka ny firaisana ara-nofo amin'ny vadinao.
Ho anao manokana ny fiainanao ara-nofo ary tsy eo mba hitsarana na haneho hevitra ny hafa. Ny firesahana amin'ny matihanina dia mety hanampy anao hampifanaraka ny eritreritrao mifanipaka ary hamaritana ny antony mahatonga anao tsy mahazo aina amin'ilay lohahevitra.
Ny fizarana ny eritreritrao amin'ny vadinao fa tsy ny fanandramana mamantatra samirery ny zava-drehetra dia mety hanampy anao hahatsapa ho mahazo aina kokoa sy hanome anao fahatokisana, miaraka amin'ny fanohanan'izy ireo, hamihina ny fahasambaranao manokana momba ny firaisana.
Tsy mila mamaly ny andrasan'ny olona amin'ny safidinao ara-nofo ianao. Ny fiainanao manao firaisana dia anjaranao ary tsy olon-kafa ary ny fahasambaranao no zava-dehibe.
9. Tsy afa-miala amin'izany ianao.
Ho an'ny vehivavy indrindra, io ‘O’ miafina io dia mety ho toy ny entan'ny angano. Raha miady mafy amin'ny orgasme amin'ny namanao ianao dia tsy midika izany hoe tokony hilavo lefona ianao! Ny firaisana ara-nofo dia tokony hahafinaritra anao roa tonta ihany koa, ka alao antoka fa mahazo ny saina mendrika anao tahaka azy ireo ianao.
Ataovy tsaratsara kokoa ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny fanokanana fotoana hijerena ny vatanao manokana ary hahalalana izay zavatra mety aminao. Ny fahatakarana tsaratsara kokoa ny amin'ny vatanao dia mora kokoa hitarihanao ny namanao hanome anao izay ilainao.
Ny fahazoana antoka fa mijanona ho vaovao sy mahafinaritra ny fiainam-piraisana ara-nofo ataonao, saingy misy izao tontolo izao ny kilalao fanaovana firaisana, ny filalaovana tantara an-tsehatra, ny fitafiana ary na dia ireo boky momba ny fanampian'ny tena aza any izay afaka manatsara ny fahazarana ataonao.
Na dia mandeha ho azy fotsiny aza indraindray na oviana na amin'izay alehanao dia mety ho ampy hamelomana indray ny fitiavanao anao.
Aza milavo lefona amin'ny firaisana satria tsy ampy anao izany. Mety ho hitanao fotsiny izay mety.
10. Manana olana ianao ao amin'ny efitrano fandrian.
Mbola misy stigma manodidina ny resaka firaisana ara-nofo sy ny olana mety hanjo anao amin'izany, ary matetika ny mpivady dia manandrana mitolona amin'ny zavatra irery fa tsy mahazo fanampiana mety.
Mety hanakana ny firesahana amin'ny olona iray ianao satria hitanao fa mahamenatra izany, fa ny mahita olona matihanina efa niofana dia ho menatra kokoa noho ny fanokafana azy ireo momba azy io.
Raha manana olana ianao, dia tsara kokoa ny miresaka amin'olona alohan'izay fa tsy aoriana. Arakaraky ny haharetan'ny olana no vao manomboka mampifandray anao amin'ny lahy sy ny vavy ary hiharatsy hatrany ny olana.
Raha marary ianao dia manantona dokotera, maninona raha manatona mpitsabo efa zatra manokana hanampy amin'ny fanaovana firaisana?
Olana be dia be no fahita matetika noho ny tsapanao, ny sasany mitranga voajanahary amin'ny fiovan'ny taona na hormonina. Aza avela hanelingelina ny fiainanao amin'ny firaisana ny olana raha tsy miresaka amin'ny olona afaka manampy.
Ny fananana fiainana miray ara-nofo miroborobo dia miankina amin'ny zavatra maro mandanjalanja - ny fotoananao, ny lohanao, ny hormoninao ary maro hafa. Tsy mahagaga raha tsy mandeha araka ny kasaina foana.
Tsy hoe rehefa manao firaisana ianao dia tsy midika hoe tsy mifankatia ary samy hafa ny fahatsapan'ny olon-tianao anao. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia ireo antony ivelany no manakana anao tsy ho afaka miala sasatra.
Ny fanokana fotoana bebe kokoa ho anao sy ny olon-tianao hifandray indray dia zava-dehibe raha te hiverina amin'ny lala-mahitsy ianao. Mila miasa ny fifandraisana raha tianao hiroborobo izy ireo.
Manomboha manao ny laharam-pahamehan'ny fifandraisanareo indray ary hianjera amin'ny toerany ny ambiny
Mbola tsy azonao antoka izay hatao mba hamerenan'ny firaisana ny fiarahanareo? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Torohevitra 9 ho an'ny mpivady izay tsy mahomby amin'ny fomba fanaovana firaisana
Fomba 15 hahatsapana ho fy indray
10 fahasamihafana lehibe eo amin'ny fanaovana fitiavana sy fanaovana firaisana
Antony 4 mahatonga ny sipanao ratsy eo am-pandriana (+ toro-hevitra 7 ho an'ny firaisana ara-nofo tsara kokoa)
Fanomezana WWE 5 ho an'ny zazavavy amin'ity Krismasy ity
WWE Rumor Roundup - Mpikambana vaovao hanatevin-daharana ny ankolafy Roman Reigns, mangalatra ny fihetsik'i Samoa Joe i Top Superstar, Heat teo anelanelan'ny tompon-daka eran-tany teo aloha (7 Jona 2021)
Fa maninona no nijanona tsy nitolona ny «The Icon»?
'Tsy tena Google ny anarako'- Kintana Ex-WWE momba ny mety ho fihetsiky ny The Miz manoloana ireo olany niaraka tamin'i John Cena [Exclusive]
Inona no lanjan'i Larry Rudolph? Mikaroha ny haren'ny mpitantana an'i Britney Spears teo aloha
Saripika: Brock Lesnar dia nahita endrika vaovao hafa tsy fahita firy nandritra ny fiatoana
Teny famporisihana: Teny manaitra 55 hanentanana sy hanomezana aingam-panahy
'Ny goosebumps!' - Kintana WWE teo aloha tamin'ny fisehoana tampoka avy tamin'i The Undertaker [Exclusive]
10 lalao TNA Wrestling lehibe indrindra
Iza moa i Sarah Potenza? Ny zava-drehetra momba ilay mpifaninana 'The Voice' teo aloha izay nahazo fiderana tamina AGT niaraka tamin'ny famoahana an'i Mary Gauthier 'Mendrika'
Roman Reigns dia nanambara ny antony niverenan'i Brock Lesnar tao amin'ny WWE SummerSlam
Ny fomba 13 izay fanaintainana ara-pihetseham-po dia ratsy kokoa noho ny fanaintainana ara-batana
fotoana mety ilazana fa tiako ianao
fizarana ratsy indrindra an'ny birao
ny fomba hanenjehana azy aorian'ny fatorianao miaraka aminy
loza ateraky ny fiarahana amin'ny lehilahy manambady
oviana i chris benoit no maty
© 2021. All Rights Reserved. gov-civil-viseu.pt | Politika Fiarovana Fiainan'Olona